China Digital Digital Bipụta lapel pin ụlọ ọrụ na-emepụta | Kingtai
Ndị ahịa a na-ejikarị mkpọ ndị a eme ihe maka mmemme ukwu nkwado, akara ngosi ụlọ ọrụ na mmemme ncheta. Ou ga-enweta mkpọ ụkwụ gị dị ihe dị ka otu izu.
Mgbe anyị natara imewe gị, anyị ga-ajụ onye mmebe anyị ka ọ see gị. Ozugbo ị kwadoro ozi niile anyị ga - emepụta dị ka ihe osise. Isi ihe anyị bụ zinc alloy, ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ndị ọzọ, anyị nwekwara ike mepụta. Ihe Nlereanya: igwe anaghị agba nchara, ọla kọpa Oge mmepụta: 5-7 ụbọchị ọrụ mgbe ị gachara nka. Ngwa ngwa ngwa dị.
Omenala metal lapel pin ji nganga Mee na USA. Gbọ mmiri na ụbọchị azụmahịa 5.
Nzọụkwụ mbụ maka baajị anyị na-abụkarị iji gosipụta eserese ahụ wee hazie mmepụta. Nke mbụ, ọ ga-ewe ụbọchị 3-5 iji wuo ngwaahịa ọhụrụ ahụ m na-akpụzi. Nke ato, ikike anyị na - arụ kwa ụbọchị bụ ihe dị ka 10000pcs kwa igwe. Nke atọ, ọ bụrụ na emere mkpụrụ edemede lapel dijitalụ, anyị ga - ahọrọ agba ị chọrọ ozugbo. Nke anọ, bipụta ụdị nhazi nke ngwaahịa ahụ.Ọ bụrụ na anyị chọrọ epoxy, anyị nwere ike tinye ya na ngwaahịa a ọzọ, nke ọzọ na-aghọ usoro ọzọ. Ou nwere ike ịhọrọ ụdị ị chọrọ!
Omenala Offset Digital Bipụtara Lapel Pins Dechapụ dijitalụ lapel pin dị mma maka atụmatụ ndị na-eji foto na eserese ma ọ bụ chọọ nkọwa ọma ndị ọzọ dị na agba. Ha bụ nhọrọ dị mma maka ọrụ nka eji eme gradients ma ọ bụ dobe ndò. A na-emepụta usoro omenala ọ bụla site na faịlụ dijitalụ, nke e biri ebi ozugbo na akwụkwọ dị elu nke etinyere na metal ahụ bụ isi, wee kpuchie bọtịnụ ahụ na epoxy doro anya maka ịmecha nke ọma iji chebe nkedo lapel gị ruo ọtụtụ afọ.
Etu esi eme omenala di iche-iche eji ebiputa aka. N'adịghị ka enamel siri ike, enamel dị nro, na ịnwụ anwụ, mkpọ lapel kere site na iji usoro dijitalụ na-akwụ ụgwọ. Omenala dechapụ dijitalụ atụdo bụ gị na-aga-pin n'ihi na vibrant na agba na mgbagwoju oyiyi ma ọ bụ aghụghọ. Enweghị ohere ịgba agba na-agba ma ọ bụ na-agba ọbara, ederede na-egosi dị mfe ma dịkwa mfe ọgụgụ n'agbanyeghị mkpụrụ edemede ị họọrọ. Deeti dijitalụ atụdo nwere kenkowaputa imecha na-adịru ogologo oge. Ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị banyere ájá ma ọ bụ nchịkọta unyi n'ihi na ọ dịghị ebe ezumike. Ngwunye ahụ dị nro na-eguzogide na-ejide ọsụsọ ma ọ bụ eri, a pụkwara ịmepụta ha n'ụdị ọ bụla i chere. Nha sitere na 3/4-inch rue 2-inch, ma uzo di site na 100 rue 10,000+.
Nke gara aga: 2D pin baajị
Osote: Glittering Lapel mkpọ
Digital Bipụta lapel mkpọ